Shrub futhi isihlahla ukunakekelwa kuhilela izici ezibaluleke kakhulu - izihlahla. Lena ngempela umsebenzi kunzima ukuthi kudinga ulwazi lwendlela yokulima ezifanele zinhlobo isihlahla noma berry sezihlahla. Yiqiniso, kokuchitha ukwelashwa, benziwa ukuma ofiselekayo somuthi, ukususa amagatsha ephukile noma onesifo, kodwa injongo eyinhloko ke akunjalo. Nezihlahla, uma kungukuthi usike, isivuno incipha nge sikhathi, izithelo izinga liwohloka, eshintsha ukuvama fruiting encishisiwe hardiness.
Lolu hlobo lokucubungula siqondiswe i yokufakelwa isihlahla ukukhula retardation ezinye amagatsha nokuthuthukisa ukukhula walabo adingekayo kumiswa umqhele esihlahleni futhi kamuva okwandisa isivuno sawo.
Isivuno eyinhloko nemithi yezithelo berry sezihlahla esiqhutshwa kwentwasahlobo. Kodwa ngesikhathi sasehlobo izinhlobo eziningi esikhula ngokushesha amahlumela yonyaka, okuyinto musa njalo sikhule endleleni efanele, kodwa ezinye amagatsha ngiwunqamule noma ugula ngenxa yezizathu ezihlukahlukene. Ngakho-ke, izihlahla Kwenziwa ekwindla, lapho iqabunga sesiphumile, futhi nalo, futhi phakathi nayo yonke inkathi yokulima .
Siwusizo kakhulu ukuze adalule le ndlela yokwelapha, izinhlobo ebusika-eziqinile apula, uma okulindele ebusika obubanda kakhulu.
Ngo izihlahla zezithelo ekwindla achithwa thinning umqhele futhi kunciphisa amahlumela. Ukunakekela kuhilela izihlahla nezitshalo ezokudabuka kwamanye amazwe ekwindla. Badinga izihlahla ukuwa, baningi ngisho nangaphezu kwezinwele izihlahla. It wenziwa ukuze sithuthukise fruiting berry sezihlahla. Nge izihlahla ehlathini ezakhiwe thinned kanye uvuseleleke.
Izihlahla liyisici ezinkulu akha ukunakekelwa currants. Lolu hlobo ukwelashwa kuyadingeka okubeka + zonke izinhlobo zayo. Lokhu kunjalo, ikakhulu adingekayo ukuze black currant. Okokuqala, kusukela ngomnyaka wesibili emva kokutshala, kudingeka usike amahlumela, kusale bobathathu nanhlanu we uqinile kakhulu futhi unempilo. Ngakho okudingeka ukwenze njalo ekwindla, kuze ehlathini akuyona eqinile 15-18 amahlumela bobudala obungefani. Ngokuvamile, kumiswa ehlathini blackcurrant uphela iminyaka emihlanu ubudala. Entwasahlobo elandelayo ukusika amahlumela esikhathini, leso kalula elibonakala black umbala phezulu. Njengoba amagatsha currants abamnyama bona abanakho ukuthambekela a amagatsha eqinile, unciphise kubo ezimbi kancane. Uyabakhathalela ezihlabayo of currant ezimhlophe futhi zibomvu futhi itholakala kumiswa amaqoqo eminyakeni emihlanu kuya kwayisithupha ukususa ababuthaka amahlumela, futhi ngokunciphisa amadala, amagatsha ugula futhi engadingekile. Kufika isikhathi lapho asebekhulile currant ezihlabayo kunciphe amahlumela. Base babhekana izihlahla ngokuphelele ekuvuseleleni. itholakala yokuthi entwasahlobo inqanyulwa endaweni isigamu ezingeni amahlumela ubudala. Prishpilivayut umhlaba labo amahlumela ukuthi ube ukukhula okuhle ngonyaka odlule, futhi amagatsha asemancane kakhulu. Ngonyaka olandelayo, wasusa zonke amagatsha ubudala asele. Ngaphezu kwalokho ngezicabha currant ezihlabayo ngaphansi Ukusincwela ezivamile.
Ngakho, benakekela izihlahla liyadingeka nsuku saziso ukulondoloza fructification ezinhle yonyaka.
Prunus serrulata: incazelo kanye nezithombe
Black Crowberry: ukutshala nokunakekela
Samburu - berry nenkundla cherry
Kuyini isikolo impesheni? kanjani umhlalaphansi impesheni amaphuzu?
Inhloso yocwaningo yi ... Isihloko, into, isihloko, izinhloso nenhloso yocwaningo
Svir River: okudoba, isithombe nomlando
Safari isitayela izingubo - obugagu ukuzingela ukuphila
Lose Weight nge Dyukanu: lapho ukuthenga bran, futhi uzisebenzise kanjani
I-computer anamandla kakhulu emhlabeni
Izimonyo njengesipho - ukukhetha jikelele